Erdogan: Safiirka Norway iyo sagaal(9) dal oo kale loogama baahno dalkeena. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Erdogan: Safiirka Norway iyo sagaal(9) dal oo kale loogama baahno dalkeena.
Madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdoğan ayaa maanta amray wasiirka arrimaha dibedda inuu dalka ka eryo safiirada 10 dal kadib markii ay soo saareen bayaan ku baaqaya in lasii daayo Osman Kavala.
Previous articleQof(1) loo qabtay, iyo labo(2) oo loo raadinayo dilkii AHU Xamse Xaashi Aadan.
Next articleDood: Maxaa sabab u ah dilalka soo kordhayo ee loo geysto dhalinyarada Soomaaliyeed ee Norway.